U bilaabida Cunnoyink Caadiga ah iyo Cunooyinka Faraha Lagu soo Qabsan Karo
Starting Table and Finger Foods - Somali
Nuujinta Ilmahaago yar
Masaasad Siinta Ilmahaaga Yar
U bilaabida Hilibka iyo Cunooyinka La Calaliyo
Waqtiga ilmaha Masaasada Iaga Joojiyo
Marka ilmuhu 9 bilood ilaa 12 bilood inta u dhexysa uu soo gaaro, ilmahaagu waqtiyada ay reerku wax cunaan ayuu ku jadwal noqon karaa cunnada ay reerka cunaanna wuu cuni karaa. Wakhtigan inta lagu guda jiro ilmo badan ayaa:
• Farahooda wax ku cuna
• Bilaaba in ay koob gacmahooda ku qabsadaan
• Bilaaba in ay qaaddo kaligood wax ku cunaan iyada oo la kaalmeynayo
• Rabooda in ay wax ka cunaan cunada ay reerku cunayaan
Cabirka maadada hemoglobin (maado unugyada cas ee dhiiga la socota oo neefta oksajiinta qaada) ee ilmahaaga maanta waa _____________.
Ku dadaal caafimaadka ilmahaaga oo sii cunnooyin feero badan leh si dhiigoodu mid caafimaad qaba uu u noqdo:
• Hilib kaligiis ah
• Caanaha naaska hooyada
• Cereal ka caruurta
• Caanaha budada ah (formula) ee la qaso oo ay feero ku jirto
Naas nuujinta ku wad illaa 1 sano jir ama ka badan.
Ilmaha la siiyo foormuladu waxay u baahan yihiin foormulada inta ay ka gaarayaan 1 sano jir. Isku qas foormula iyo caano hal todobaad. Todobaadka ku xigana, caano kaliya sii.
Si aad ugu caawisid in ilmahaagu uu ruugista barto, sii cunooyin ruugis u baahan. Cunooyinka shiidan, kuwa la jejebiyey ama cunooyin si yar-yar loo jarjaray ayaa ah cunooyin fiican oo aad ilmaha u doori karto. Cunooyinka caadiga ah ee reerku cuno waa in laga dhigaa kuwo jilicsan oo u fudud ilma-yar inuu wax ka cuno. Marka ilmuhu 1-sanad jir uu gaaro, cunooyinkiisa oo dhan waa in ay noqdaan cunooyinka reerku cunayaan.
U diyaar garooow wasakh uu ilmuhu abuurayo. Wasakhdu waa talaabo muhiim ah oo barashada cuno cunidda la socoto.
Hadii uu ilmahaagu cunno diido mar, waqti kale ku fiiri mar kale. Cunooyin dhadhan ku cusub leh in uu ilmuhu barto waqti ayey qaadataa.
Sii xiliyada raashinka caadiga ah la cuno iyo xiliyada dhexeba cunooyinka faraha ilmuhu ku soo qabsan karo, sida:
• Rooti afar-gees ah
• Buskutka yaryar Bariis
• Farmaajo dhuuban
• Khudrad jilicsan oo la jar-jaray
• Rootiga dhuudhuuban
• Baasto si fiican loo kariyey
• Furutad gesacadeysan ama mid bisil oo la fiiqay
• Malaay tuuno cadcad yar ah, hilib shiidan oo la isku kuusay.
Waa muhiin in aad u ogolaato in ilmahaagu kaligiis wax cuno, inkasta ee uu farihiisa oo keli ah uu wax ku cuni karo. Cunooyinka faraha lagu soo qabsan karo waa cunooyinka reerku cuno oo ilmahu si ay u cunaan loo yar-yareeyey, ama cuno kasta oo iyada oo is heysata uu ilmuhu weelka uu wax ka cunayo ka soo qaado uu afkiisa gashan karo isaga oo kurisigiisii ku fadhiya.
U bilaabidda Cunooyink Caadiga ah iyo Cunooyinka faraha lagu soo qabsan karo - sii socota
Ka taxadir! Ilamahaagu wuu ku sixan/mergan karaa cunooyinka ah sida daangada, nacnacca, iniinta nuts ka, canabka iyo hot dog ga gobo ahaanta loo gooyey.
Cabitaanada fudud ee gasacadaysan, casiirka fruit punch iyo shaaha uma fiicna ilahagaagu in ay cabaan.
Canugga koobka wax ku sii si uu u barto. Caanaha naaska ama foormulada ku sii koob wakhtiga cuntada. Iska ilaali koobabaka caruurta oo afka xiran waxna aysan ka daadadan.
Qiyaastii markuu canuggaagu hal sano jir yahay ku bilaw in aad caano aan badnayn ku siiso koob. Caanahu ku sii koob oo kali ah. Marka canuggaagu u wareego caano, dhalada waad iska xoori kartaa! Cannugaagu waa in uu gebi ahaanba ka go’aa dhalada markuu yahay 12-14 bilood jir.
Canuggaagu waxaa cuntooyinkan laga siinayaa WIC markuu hal sano jir yahay:
• Cabitaan la miiray(Casiir)
• Siiriyaalka dadka waaweyn
• Cunto ka samaysan dalag aan la buunsha bixin
• Miraha la cuno(fruits)iyo khudrar
• Digir ama mid gasacadaysan ama laws shiidan (peanut butter)
Liiska cuntooyinka lagu talinaayo. Ilamahaaga yar waxaa dhici karta in uu intaan ka yar ama intaan kabadan uu cuno. Ilmaha u daa in uu cuno inta uu isagu doonayo. U samee canuga wakhtiyo la cuno cuntada caadiga ah ee saddexda wakhti la cuno iyo wakhtiyo dhexe oo la cuno cuntada fudud.
• 6-8 oz. oo caanaha naaska ama kuwo budada ah oo feero lagu daray
• 4-6 qaadada yar oo cereal ka caruurta ah
• 2 qaadada yar oo furuto jilicsan oo jarjaran ah
• 1/2 oo rooti (slice ah) oo la kululeeyey
Quraacda iyo qadada dhexdooda
• Koob ku sii 2 oz. oo caanaha naaska ama kuwo budada ah ama
• 100% cabitaanka casiirka ah
• 1-2 oo buskutka yar yar ah
• 1-2 qaadada yar oo hilib jilicsan oo jarjaran ah
• 2 qaadada yar oo khudrad jarjaran ah
• 1/2 rooti ah
Casiryada (qadada iyo cashada dhexdooda)
• 2 oz. oo biyo koob ku jira ah
• Cunooyin faraha lagu qaban karo sida: rooti duban; farmaajo; furuto jilicsan oo jarjaran ama khudaar
• 2-4 qaadada yar oo khudrad jarjaran ah
• 2-4 qaadada yar oo furuto jilicsan oo jarjaran ah
Inta uusan seeexan ka hor 6-8 oz. oo caanaha naaska ama kuwo budada ah oo feero lagu daray